Raw Testosterone propionate poda Vagadziri & Vanotengesa - Fakita
Testosterone Propionate powder ndeimwe yemhando dze testosterone esters. Izvi zvinodhaka ndeye anabolic steroid uye ndeyewo unonyanya kuzivikanwa mukugadzira muviri. Chinangwa chayo ndechekuwedzera musimba masimba uye simba.Testosterone Propionate inopfupika inoshandisa mafuta-yakagadzirwa nejecha re testosterone. Testosterone Propionate powder inhibits gonadotropin secretion kubva planduri yepituitary uye ablates production yesrogen mumapapiro omukati, zvichidaro zvichideredza maitiro esterogen ane simba. Mukuwedzera, mutengi uyu anokurudzira kugadziriswa kwehukama hwepabonde uye hunoratidzwa kuti testosterone inotsigirwa mu hypogonadal varume.
Raw Testosterone Propionate powder (57-85-2) video
Raw Testosterone Propionate powder (57-85-2) Tsanangudzo
Raw Testosterone Propionate powder ndeyenguva yakaita mafuta-based injectable formulation of testosterone. Testosterone inhibits gonadotropin secretion kubva planduri yepituitary uye ablates production yesrogen mumapapiro omukati, zvichiita kuti kuderedza maitiro eestrogen ane simba. Mukuwedzera, mutengi uyu anokurudzira kugadziriswa kwehukama hwepabonde uye hunoratidzwa kuti testosterone inotsigirwa mu hypogonadal varume.
Raw Testosterone Propionate powder inongowanikwa kune vanhu vakashandisa kana kutora ichi chirwere. Iyo ister testersterone ine propionate inotsiva panzvimbo ye 17-beta. Migumisiro ye testosterone muvanhu uye mamwe maitiro anoitika nenzira yezvipfungwa zviviri: kuburikidza nekushanda kwe-androgen receptor (zvakananga kana seDHT), uye nekushandurwa ku estradiol uye kushandiswa kwezvimwe zveestrogen receptors. Free testosterone (T) inotakurirwa mukati me cytoplasm yemagetsi emagetsi, iyo inogona kusungirirwa kune anrogen receptor, kana inogona kuderedzwa ku 5 & alpha; -dihydrotestosterone (DHT) ne cytoplasmic enzyme 5 & alpha; -kudzidzira. DHT inosungira kune imwechete ye-androgen yakatonyanya kunyanya kudarika T, kuitira kuti iyo androgenic potency iri pamusoro pe2. 5 nguva iyo yeT. T-receptor kana DHT-receptor complex rinoshanduka sarudzo iyo inobvumira kuti ipinde mujeri reyero uye kusunga zvakananga kune zvakananga zvinokonzera nucleotide ye chromosomal DNA. Nzvimbo dzekusunga dzinonzi hormone response elements (HREs), uye dzinobata basa rezvinyorwa zvevamwe mazamu, zvichiita kuti uyerogen zvikanganiso.
Product Name Raw Testosterone Propionate powder
Kemikari Name Raw Testosterone Propionate powder;
Kirasi yeMishonga steroid ester
Molecular Wsere 344.495 g / mol
Monoisotopic Mass 344.235 g / mol
Kunyorera Point 244 ku 252 ° F (NTP, 1992)
Water Solubility 1.48 mg / L (pa 25ºC)
Biological Half-Life Hapana zuva
ruvara machena kana machena-machena machena
kana chichena kana chichena-chena crystalline powder
Skukodzera pasi pe 1 mg / mL pa 76.1 ° F (NTP, 1992)
APane 1,3-Dimethylbutylamine inoshandiswa kuongorora kushandiswa kwemhando isina kukodzera yemapolymethacrylate resin sechikamu chechimiro mumvura chromatography ine kuonekwa kweUV.
Chii chakakosha Testosterone Propionate powder (57-85-2)?
Testosterone propionate powder is slower releasing anabolic steroid nehafu yeupenyu. Izvi zvinobvumira mushandisi kumhanya mafupi ma testosterone propionate mavhiki e8-10 sezvakakwana yepamusoro yeplasma ropa mazinga anowanikwa kumavhiki e2-4. Icho chigadzirwa uyerostane steroid inobereka testosterone nenzira ye17β propionate ester ye testosterone. Testosterone propionate powder inguva yakagadzirwa zvikuru. Testosterone is steroid ine simba kwazvo, uye ester propionate inoguma mumamiriro ezvinhu umo kuwedzerwa kweropa kunogona kudzorwa zvakanaka, uye kuguma kwekushandisa kuchaunza kukurumidza kuderera muzvikamu zveropa kumushandisi. Izvi ndizvo zvinoita kuti chigadzirwa chizivikanwe nevatambi vechikadzi.
Iyo Yakakura sei Testosterone Propionate powder (57-85-2) mabasa
Gene kushandurwa kunotangwa, umo iyo nitrogen muyero mumuviri inoshandurwa nenzira yakanaka. Mazinga e insulini-kufanana nekukura kwemisumbu inowedzera muropa uye musimba. Propionate inokonzera kupararira kwema satellites mumisungo, nemhaka yekuti kune kudzoka kwemisumbu uye hyperplasia. Nenzira, ose esters ane nzira imwechete yekuita; misiyano huru iri mune chinangwa chezviito zvavo nezviito.
Raw Testosterone Propionate powder (57-85-2) Dosage
Nhamba yakawanda ye testosterone propionate ndeye 50-100mg zuva rimwe nerimwe kana rimwe zuva rimwe nerimwe. Izvi zvinopa chiitiko chevhiki nevhiki ye350mg-700mg. Propionate inowanzoshandiswa panguva yemashoko ekucheka, pamwe chete nezvimwe zvisingabatsiri steroid zvakadai sa winstrol kana primobolan. Uyewo zvinobudirira zvakanyanya kubatana nepropionate ne-non-aromatising androgen yakafanana ne-trenbolone, iyo inogona kuuya nekatarisiro yakaoma yakajeka. Kuwedzera mamwe androgenic steroids kune propionate zvichaita kuti zvive nemamwe mazita uyerogen ane chokuita nemigumisiro yechirwere.
Raw Testosterone Propionate powder (57-85-2) Benefits
Testosterone propionate inowanikwa:
Inowedzera musimba masimba nesimba
Kunopisa mafuta, kunowedzera mukurumbira
Kugadzirisa njodzi yeifo ischemic yemwoyo uye coronary
Testosterone propionate profile ine nguva shoma. Iyi ndiyo testosterone ester yakakurumidza. Nokudaro, zvirwere zvinowanzoitwa muzuva kana zuva rimwe nerimwe. Zvechokwadi ichi ndicho chinonyanya kukanganisa kuenzaniswa nezvimwe zvekare zvakagara maesters.
Testosterone propionate kuongorora zvinoratidza kuti mushure mokunge iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinzwa kuwedzera kwesimba, unobatanidza nekuwedzera kwemahomoni mumuviri. Izvi zvinoreva, apo mishonga inoonekwa mumuviri, inokurumidza kupinda muropa, saka inonzwa mushure mokunge mujoyi wokutanga. Izvi zvine zvose zvinowedzera uye zvidhori. Izvo zvakanyanya ndeyokuti pakarepo mushure mejojo ​​iwe unonzwa uine simba guru, uye kuderedza iri mukuti mishonga inokurumidza kubviswa kwenguva pfupi. Unofanirwa kuvhara kazhinji (zuva nezuva kana rimwe zuva rimwe).
Kune vatambi vakawanda mushonga wacho hauna kuchengetedza mvura mumuviri (kana kuti yakanyanya kuduku), naizvozvo ichi chinodhaka (propionate) hachizoita kuti fikiti yakakurumidza mumuviri mashoma (semuenzaniso, 5-6 kg mumavhiki mashomanana) mu kuenzaniswa nedzimwe esters. Zvisinei, testosterone propionate inoguma kuwedzera kuwanda munguva yepropionate yakakwirira kwazvo mukusiyana nevamwe. Iko kunewo hutano uye hutano.
Imwe migumisiro ye testosterone propionate yakaenzaniswa nedzimwe esters ndeyekuti testosterone propionate kutenga inodhura. Uye nekuda kwekuti mushonga unogona kushandiswa sekutsvaga kwemasimba mashoma, uyewo panguva yekuvhenekera kwemafuta akawanda, saka hazvirevi kuishandisa kuirima (nokuti inodhura, uye majekesiti anofanira kuitika anenge zuva nezuva, saka hazvibatsiri pakurema). Saka, vatambi vakawanda vanosarudza mamwe mishonga maererano nehuwandu, uye vanotsigira mafuta akawanda.
Tenga Testosterone Propionate powder kubva kuBuasas.com
Raw Mesterolone (Proviron) powder (1424-00-6)
Raw Sustanon 250 powder
Raw Testosterone Cypionate powder (58-20-8)